Amanxweme - Inkcazo yeGrafi Imigomo
Amanxweme yimimandla yomhlaba ehlanganiswe ngamanzi amanzi okanye amanzi anetyuwa kunye neentlobo zezilwanyana ezinokuthi zilungele ubomi kwindawo egcweleyo. Azinzulu kwaye avumela ukukhula kwezityalo ezigxininiswe okanye ezinamathele ezinjengamaqabunga yamanzi kodwa kunye nezityalo ezihambayo ezikhululekile ezifana ne-duckweed.
Amanxweme amelela intlanganiso yeendawo zokuhlala ezimbini (umhlaba kunye namanzi) kwaye ngoko ke ezinye zeendawo eziphilayo ezininzi kwihlabathi (ezinye zithetha ngaphezu kwamanzi amahlathi ) kunye neentlobo ezininzi zehlabathi kunye namanzi, kunye nezinye ezizodwa kwiindawo ezinxweme.
Okwangoku, iindawo ezinxantyambo zikhoyo kwiizwekazi zehlabathi ngaphandle kwe-Antarctica, kodwa ngenxa yokungcola okwenyukayo nokunciphisa umhlaba ovulekileyo, bonke basongelwa. Imizekelo ibandakanya iMahavavy-Kinkony Wetlands eMadagascar, kunye ne-Everglades eFlorida.
Imimandla yamanzi iqala ngokuzaliswa komhlaba. Amaninzi awakhiwa ekupheleni kwexesha lokugqibela leqhwa xa i-glaciers ibuyiselwa kwaye i-depression engapheliyo yashiya igcwele amanzi. Ngethuba lexesha, iindwangu kunye neengcola ezidityanisiweyo eziqokelelwe kwiindawo zokucima amanzi kwaye zazingagcini kwada kwaze kwaba yilapho iqokelelo kunye nezidumbu ezigciniweyo zizele emanzini kwaye zashiya emanzini amaninzi angasemanzini azungezwe umhlaba owomileyo.
Amanxweme angaphinda ayenze xa umlambo uphahla iibhanki zakhe okanye xa utshintsho olwenziwa kwinqanaba lolwandle lenza indawo ezomileyo ezizalisiweyo. Ukongezelela, iimeko zemozulu zinokuchaphazela ukubunjwa kwamanzi njengemvula ephezulu kwimimandla eyomileyo kunye nemifudlana embi eyenza ukuba umhlaba uzaliswe.
Emva kokuba kubekho imilambo, zihlala ziguquka. Njengoko ukukhula kwamanxweme kunye nama-debris kubangela ukuba imilambo ifake, bahamba kunye neengcambu nezityalo ezifile, kunokubangela ukuba imilambo ibe yinto engacacile, ekugqibeleni ukuya kwindawo apho iindawo eziphezulu ziphakama ngaphezu kwetafile yamanzi kwaye zome. Xa kwenzeka oko, iintlobo zezityalo kunye nezilwanyana zasemhlabeni ziyakunqanda indawo.
Kukho iintlobo ezimbini eziphambili zemithombo yamanzi - iindawo ezinxweme eziselunxwemeni kunye namanxweme etyuwa, kunye namanzi amanxweme angcolileyo kunye namachibi.
Amanxuwa enxweme angaselunxwemeni phakathi kweendawo ukuya kwiindawo eziphakamileyo zonxweme emhlabeni wonke, kodwa eziqhelekileyo kwi-Atlantic, Pacific, Alaska naseGulf Coast. Amanxweme angaselunxwemeni afana neendawo ezisemaphandleni, ummandla apho umlambo uhlangana khona nolwandle, kwaye ulungelelanisa kumanqanaba ahlukeneyo okunyuwa kwamanzi kunye namanzi ngenxa yezenzo zamanzi. Ngenxa yemeko eyahlukileyo yale ndawo, amaninzi amanxweme ahlambulukileyo anama-flats angenakubalwa kunye neentlanzi zentlabathi.
Ezinye izityalo ke, ziye zakwazi ukuvumelanisa nale miqathango. Ezi zibandakanya utshani kunye nezityalo ezinjengotshani ezinxantyambo zetyuwa kwimida yaseUnited States. Ukongeza, iintlambo zeemangxube ezenziwe ngetyuwa imithi yothando okanye izitshalo ziqhelekileyo kwiindawo eziselunxwemeni.
Ngokwahlukileyo, iindawo ezisemanzini ezisemaphandleni zihamba kunye nemilambo kunye nemifula (ngamanye amaxesha kuthiwa ngamanzi amanxweme), kwiindawo ezikude, kunye nemida yamanxweme, okanye kwezinye iindawo eziphantsi komhlaba apho amanzi aphantsi komhlaba ahlangana nomhlaba okanye xa i-runoff ibaluleke ngokwaneleyo ukuvumela ukubunjwa. Ukunciphisa ngamanye amaxesha kunokuthi kuzalise umhlaba kwaye kudala izikhumba okanye imithombo yamanzi enexeshana ebizwa ngamachibi e-vernal.
Ngokungafani nemigxobhozo yamanxweme, kwimimandla yamanzi imilambo ihlala iqukethe amanzi amanzi. Ziquka imilambo kunye namanzi amanxweme azaliswe izityalo ezinobuncwane kunye neempampu ezilawulwa zizihlahla kunye neepampu ezinemihlathi ezele imithi.
Ngenxa yokuba imimandla yamanzi iphakathi kwezinto ezininzi eziphilayo ezivelisa i-biologically emhlabeni, zibaluleke kakhulu kwiintlobo zeentlobo, ezininzi zazo ezisengozini. Ngokomzekelo, eUnited States, enye yesithathu yezilwanyana ezisongelayo kunye neengozi ezisemngciphekweni zihlala kuphela kwimimandla yamanzi, ngelixa isiqingatha zisebenzisa imithombo yamanzi kwixesha lokuphila kwabo. Ngaphandle kwemigxobhozo, ezi ntlobo ziza kuphele.
I-Estuarine kunye neentlanzi zaselwandle kunye ne-shellfish, kunye nezinye izilwanyana kufuneka zibe nemigxobhozo ukuze ziphile njengoko zizahlula kunye / okanye zinike isondlo esiphezulu sokutya ngokuchithwa kwemveliso yesityalo.
Ezinye zeentlobo ezihlala kwimigxobhozo ziquka amadada emithi kunye nama-muskrats. Ezinye iintlanzi, izilwanyana ezinobuthi, izilwanyana ezinwabuzelayo kunye neentaka ziya kutyelela imilambo ngezikhathi ezithile kuba zibonelela ukutya, amanzi kunye nendawo yokuhlala. Ezinye zazo zi-otters, iibhere ezimnyama kunye nama-raccoons.
Ukongeza kwizinto ezizodwa zendalo, imilambo yamanzi iphinda ibe njengesihluzo sokungcola nokudityaniswa kwamanzi. Oku kubalulekile kuba ukuhamba kwamanzi emvula ngokuqhelekileyo ilawulwa yizilwanyana ezinobungozi bezilwanyana ezinobungozi kunye nezinye izinto ezingcolileyo. Ngokuhamba emanzini ngaphambi kokufikeleleka kumanzi avulekileyo, oku kuhlongozwe kwaye kaninzi, i-sediment ngokweqile yakha kwiindawo zamanzi kunokuba imilambo okanye amanye amathambo amanzi.
Amanxweme nawo anceda ekukhuselweni kwamanzi amaninzi njengoko benza njengeiponji ezithatha imvula kunye namanzi amaninzi. Ukongezelela, iindawo ezinxweme zibalulekile ekunciphiseni ukuguguleka kwamanxweme njengoko zinokuthi zibe yintlambo phakathi komhlaba kunye nolwandle-into ebalulekileyo ukuba ibe neendawo ezijongene neziqhumane neziqhwithi. Iindawo ezisemanzini ezisemaphandleni zithintela ukukhukuliseka ngenxa yokuba izimpande zityalo zentlambo zibambe umhlaba.
Impembelelo yabantu kunye nokuLondolozwa
Namhlanje, imimandla yamanzi imimandla ebonakalayo ekhuselekileyo kwaye ngenxa yemisebenzi yabantu, baye bahlaselwa kakhulu. Ukuphuhliswa kwamanzi kunye nokucinywa kwamanzi amanxweme kuye kwabangela ukungcola okongeziweyo (kumgangatho wokuba umthamo wemvelo awukwazi ukuqhubeka), ukunciphisa ukufumaneka kwamanzi kunye nomgangatho wamanzi. Ukongezelela, ukuqaliswa kwezilwanyana ezingenanto kungatshintshi uhlobo lwezilwanyana zendalo kwaye ngezinye izihlandlo zendalo ezixhamlayo. Kungekudala, iindawo ezininzi ziye zaqonda ukubaluleka kwemimandla emanxweme ngenxa yeenzuzo zabo zezoqoqosho nezendalo. Ngenxa yoko, kwenziwa iinzame zokukhusela imilambo ekhoyo, ukubuyisela kwakhona ukulimala, kunye nokuhlakulela imimandla emitsha, kwindawo efanelekileyo.
Ukujonga indawo ye-wetland e-United States, tyelela iNational Wetlands Inventory.
I-Karst Topography neSinkholes
IJografi yoLwandle lwasePacific
Iindawo ezigqibeleleyo zokufumana i-LDS (i-Mormon) I-Clip Art ne-Digital Images
Inkohliso Yomqulu kaMarkus Zusak
Izidada zaseRoma zasendulo kunye nezinye izihlangu
Unyaka weNyaka ngesiSpanish
Ubumnandi Bemihlali Yobomi
Iingcaphuno ezi-13 malunga novuyo lwabantwana abantombazana